बजार बढे पनि बिक्रीकर्ता हावी भएको सङ्केत ? कहाँ निर छ सानो प्रतिरोध ? - नेपालबहस
बजार बढे पनि बिक्रीकर्ता हावी भएको सङ्केत ? कहाँ निर छ सानो प्रतिरोध ?
| १८:३६:२८ मा प्रकाशित
माघ ७, काठमाडाैं । नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ८७ अंकले वृद्धि हुँदै २३४२ दशमलव ७६ को विन्दुमा बन्द भएको छ तर पनि बजार आज २३६१ को विन्दुमा खुलेकोमा प्राविधिक मैनवत्ति भने रातो बनेको छ। नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा ६ अर्ब २१ करोडको शेयर कारोवार भएको छ ।
दोश्रो बजार २३६१ को विन्दुमा खुलेकोमा २३६२ को उच्च विन्दु सम्म पुगेको थियो । नेप्सेको आज न्यून विन्दु २३२२ रहेको छ ।
मंगलबार (अघिल्लो कारोवार दिन ) २३६१ मा बजार खुलेकोमा आज पनि २३६१ मा बजार खुलेको थियो। दुवै कारोवार दिन बजार खुला भए देखि नै घटेको छ । बजारले दुवै दिन २३६२ को क्षेत्रलाई उच्च विन्दु बनाएको र त्यही विन्दुबाट घटेको देख्न सकिन्छ । यसको अर्थ बजारको एउटा सानो प्रतिरोध २३६२ देखि २३६५ को क्षेत्र हुन सक्छ । जुन त्यति बलियो प्रतिरोध भने होइन।
आज फाइनान्स कम्पनको शेयर आकर्षक रुपमा बढेको छ । फाइनान्स उपसुचक ४ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा जीवन बीमा उपसुचकपनि ४ दशमवल ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वाणिज्य बैंक उपसूचकमा भने थोरै करेक्सन देखिएको छ।
नेप्सेमा दुई लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन १७ घण्टा पहिले
शेयरबजारमा तीन अर्बको आईपीओ आउँदै, सबैलाई शेयर पर्ने निश्चित २२ घण्टा पहिले
महिला लघुवित्तको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिदै, यी तीन ठाँउबाट नतिजा हेर्न सकिने ? २२ घण्टा पहिले
इन्भेष्टमेन्ट बैंक ३५ औं वर्षमा, ८७ शाखामार्फत सेवा प्रदान १९ घण्टा पहिले
भारतबाट अवैधरूपमा कुखुरा तस्करी हुने क्रम बढ्दो १९ घण्टा पहिले
कांग्रेसका नेता जोशीको नशा फुटेर मस्तिष्कमा छरिएको रगत निकालियाे १४ घण्टा पहिले
निगमको थानकोट डिपोमा अब रहेन सुरक्षा चुनौती १ दिन पहिले
विघटिन प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गर ४ दिन पहिले
भागरथी हत्या प्रकरण : अनुसन्धानका लागि ५ दिन थप ! ४ दिन पहिले
शिक्षकको अभावमा स्टोररुममा नै थन्किए कम्प्युटर ३ दिन पहिले
मानव बस्तिलाई मध्यनजर गर्दै तनहुँ आयोजनाले तटबन्धन गर्ने १४ घण्टा पहिले
क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी १७ घण्टा पहिले
महाबुका नागरिकले पाउन थाले स्वास्थ्य सेवा २ हप्ता पहिले
‘स्टार क्रिकेट २०२१’ गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालामा हुने ४ हप्ता पहिले
काेराेना कहरमै ११ अर्ब २९ करोडको औषधि आयात ७ महिना पहिले
सुदूर सरकारले ल्यायाे कोभिड-१९ बाट प्रभावितका लागि विशेष कार्यक्रम ६ महिना पहिले
नेकपा भित्रको विवाद विभाजन उन्मुख ३ महिना पहिले
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कोरोना संक्रमण ४ महिना पहिले